तपाइँलाई एक वकिलसँग काम गर्ने बारेमा के जान्न आवश्यक छ - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
सम्पादकको पिक अप्रिल 12, 2021 अप्रिल 10, 2021 सियरा पावेल ब्लग, व्यापार, सम्पादकको पिक
यो तपाईं मद्दत गर्दछ यदि एक वकिल छ जो तपाईंको कानुनी आवश्यकता को विषय राम्ररी बुझ्दछ तर एकै समयमा तपाईंलाई उचित रूपमा चार्ज गर्ने एक।
कुनै कानूनी क्षेत्रको लागि त्यहाँ कुनै मानक शुल्क छैन।
सस्तो महँगो छ।
हो, त्यहाँ धेरै कानुनी चीजहरू छन् जुन तपाईं आफैंमा व्यवहार गर्न सक्नुहुन्छ र प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँसम्म, तपाईंलाई अझै मद्दत, सल्लाह, वा वकिलको जानकारी चाहिन्छ; तपाईं कुनै दुर्घटनामा संलग्न भएको हुनसक्दछ, गलत तरिकाले जागिरबाट निकालिएको, कुनै अपराध गरेको आरोपमा, वा केहि कानुनी आवश्यकताहरू पूरा गर्न चाहानुहुन्छ। त्यहाँ बाहिर धेरै वकिलहरू छन् जसले तपाईंको बैंक भ break्ग बिना नै मद्दत गर्न सक्दछन्। यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन तपाईंले जान्नु पर्दछ जब तपाईं वकिलसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ।
आकस्मिक शुल्कहरू सधैं राम्रो विचार हुँदैन।
अधिवक्ताको शुल्कको आधारभूत
जब तपाई एक वकिललाई भर्नु अघि शुल्कको आधारभूत कुरा बुझ्नुहुन्छ, वकील र ग्राहकहरु बीच उठ्ने सामान्य गलतफहमीबाट बच्नको लागि तपाई राम्रो स्थितिमा हुनु हुनेछ। यो तपाईं मद्दत गर्दछ यदि एक वकिल छ जो तपाईंको कानुनी आवश्यकता को विषय राम्ररी बुझ्दछ तर एकै समयमा तपाईंलाई उचित रूपमा चार्ज गर्ने एक। तल केहि सामान्य र आधारभूत नियमहरू छन् जुन तपाईलाई थाहा हुनुपर्दछ।
कुनै कानूनी क्षेत्रको लागि त्यहाँ कुनै मानक शुल्क छैन। शुल्क तपाईंको कानूनी समस्याको प्रकृति, वकिलको प्रतिष्ठा, र यस्तै समस्याहरूको लागि जाने दर जस्ता अन्य कारकहरूमा आधारित छ।
सस्तो महँगो छ। हो, तपाईं आफ्नो खर्चहरूमा बचत गर्न चाहनुहुन्छ। जहाँसम्म, यसको मतलब यो होइन कि तपाईंले त्यहाँ सबैभन्दा किफायती वकिल खोज्न जानु पर्छ, विशेष गरी यदि तपाईंको कानुनी आवश्यकताहरू जटिल छन्। एक नयाँ वकिल प्रति घण्टा A .० चार्ज एक अनुभवी वकील भन्दा बढी खर्च हुन सक्छ जो प्रति घण्टा $ 80 चार्ज गर्दछ।
आकस्मिक शुल्कहरू सधैं राम्रो विचार हुँदैन। यो राम्रो विचार हुन सक्छ किनकि तपाईले जित्नुभए पछि मात्र भुक्तान गर्नुहोस्। जे होस्, यदि त्यहाँ जोखिम समावेश छ भने, आकस्मिक शुल्क ले तपाईंलाई धेरै खर्च गर्न सक्दछ, तपाईंको कानूनी दावीको claim०% सम्म।
सुरक्षा चासोहरू जाने बाटो छैन। यदि सम्भव छ भने, कुनै पनि वकिललाई प्रस्ताव गर्नुहोस् कि तपाईं उनीहरूलाई अन्य सम्पत्तीमा भुक्तान गर्नुहुन्छ कि तपाईंले मुद्दा गुमाउनुपर्नेछ।
तपाईं प्रक्रियामा पनि एक भूमिका खेल्नुहुन्छ
केहि ग्राहकहरु प्रतिनिधित्व जब एक वकिल को भूमिका बुझ्न असफल। त्यहाँ परिस्थितिहरू छन् जहाँ वकिलको भूमिका सीमित छ र अरू जहाँ भूमिका फराकिलो छ। उदाहरण को लागी, एक परिस्थिति लाई विचार गर्नुहोस् जसमा निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ कि कसरी मामिलाहरुलाई सम्हाल्नु पर्छ वा कसरी विवाद सुल्झाउनु पर्छ। यहाँ वकिलको भूमिका तपाईलाई पर्याप्त जानकारी र सल्लाह प्रदान गर्नु हो, निर्णयको बारेमा तपाईलाई सिफारिशहरु दिदै। यद्यपि निर्णय गर्ने काम तपाईंको हातमा छ; तपाईंसँग अन्तिम भन्नु छ।
वकिलका विभिन्न प्रकारहरू छन्
वकिलहरू घोडा जस्तै हुन्, तिनीहरू मूल रूपमा सबै एक समान छन्, तर तिनीहरू विभिन्न जातहरूमा आउँदछन्। बिभिन्न वकिलहरु बिभिन्न क्षेत्रहरुमा विशेषज्ञता राख्दछन्, प्रत्येकलाई आफ्नै शक्तिले सहयोग गरिरहेको हुन्छ। तसर्थ, एक वकिलको भ्रमण गर्नु अघि तपाईले सबभन्दा पहिले विशिष्ट क्षेत्र पत्ता लगाउनु पर्छ जसमा तपाईंलाई सहयोग चाहिन्छ। त्यहाँबाट, अब तपाईं त्यसका लागि उपयुक्त वकिलसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं काममा हुँदा घाइते हुनुभयो र तपाईंको समय-घाटा सुविधाहरू दाबी गर्न चाहनुहुन्छ भने, सम्पर्क गर्नको लागि सबैभन्दा उपयुक्त वकिल एक हो L&I अटर्नी। यदि तपाइँ एक वकिल चाहानुहुन्छ जसले अदालतमा तपाइँको प्रतिनिधित्व गर्दछ, एक नागरिक अभियोगी काममा आउनेछ।
सुरक्षा चासोहरू जाने बाटो छैन।
तपाईले सामना गरिरहनु भएको कानूनी मुद्दाले खास फरक पार्दैन; त्यहाँ सँधै एक वकिल आउनेछ जो तपाईंलाई यसको साथ मद्दत गर्न सक्दछ तपाईंको मानसिक शान्तिको लागि, सहि फेला पार्नुहोस् जसले तपाईंको केसलाई प्रभावी रूपमा सम्हाल्छ।
कुनै पनि अन्य पेशा जस्तै, एक वकिल पनि समय-समय गल्ती गर्न सक्दछ। यद्यपि वकिलले उच्च व्यावसायिकता, ज्ञान, र गुणात्मक उत्तरदायित्वका साथ यस्ता मामिलाहरू सम्हाल्ने अपेक्षा गर्नुहोस्। मिसटेप्स मार्गमा देखा पर्न सक्छ। यसको मतलव यो हुनु हुँदैन कि वकिल काम को लागी फिट छैन। सबै भन्दा राम्रो कहिलेकाँही टम्बल।
त्योले भन्यो, तपाईले परिस्थितिहरु पनि पाउन सक्नुहुन्छ जहाँ एक वकिल सक्षम छैन। उनीहरूको आनीबानी हुन सक्छ जुन तपाईंले पेशेवरबाट अपेक्षा गर्नुहुन्न। यसले नैतिक मुद्दाहरू, प्रक्रियात्मक मुद्दाहरू, र व्यक्तिगत मुद्दाहरू समावेश गर्दछ। यस्तो परिदृश्यमा, तपाईंसँग एक गलत प्रयोगको लागि दावी गर्न अधिकार छ।
त्यस्ता गल्तीहरू र अव्यावसायिक कार्यहरूको सम्भावना कम गर्न, यदि तपाईंले सावधानीपूर्वक र राम्ररी बुझ्नुभयो भने यो उत्तम हुनेछ एक वकिल खोज तिनीहरूलाई काममा लिनु अघि। के तिनीहरू कामका लागि उपयुक्त छन्? विगतका ग्राहकहरुका अनुभवहरु के हुन्?
कानूनी प्रक्रिया संग व्यवहार गर्दा एक वकिल संग काम को अनुभव संग कुराकानी हुनु असहमति र भ्रमबाट बचाउँछ। जे होस्, जब तपाई उत्तम वकिललाई छनौट गर्नुहुन्छ, सबै चीज सहजै बग्नेछ।
सांप्रदायिक समाचार कानुन कानूनी